राजसंस्था भन्दा पितृसत्ता धेरै बलियोः डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे |
उपसभामुख डा. शिवमायाद्वारा पदबाट राजीनामा
प्रकाशित मिति :2020-01-20 21:28:27
ललितपुर । पदबाट राजीनामा दिँदै उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजसंस्था भन्दा पितृसत्ता धेरै बलियो रहेको बताएकी छन् । संसद बैठकमा उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आज सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तुम्बाहाङ्फेले पितृसत्ता उन्मूलनका लागि अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।
आफू सभामुख नभए पनि संस्थालाई संविधानअनुसार सफल बनाएर छाडेको दाबी गर्दै डा. तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘हामी सबै मिलेर राजसंस्था सहजैसंग फाल्यौं । तर राजसंस्थाभन्दा पितृसंस्था ठूलो रहेछ ।’
आफू सभामुख हुन्छु र हुन्न दोस्रो पाटो हो भन्दै आफूले यो संस्थालाई सफल बनाएको उनले बताइन् । उनले आफ्नो ब्याकअपमा कोही व्यक्ति र संस्था नभएको पनि उल्लेख गरेकी छन् । ‘ब्याकअपमा को छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । कुनै व्यक्ति र संस्था होइन संविधान थियो । संविधानले निर्देशन नगरेको भए यो अवस्था हुने थिएन । संस्थाले दिएर के हुन्थ्यो ? व्यक्ति र संस्थाभन्दा ठूलो संविधान हो,’ उनले भनिन् ।
‘मैले जे बोलें त्यो पुर्याएँ । नेताले भनेको आधारमा होइन,’ उनले भनिन्, ‘कहिले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो । सत्तापक्षले उम्मेदवार तय गरेर सन्देश आएपछि मार्गप्रशस्त गरेको थिएँ । त्यो कुरा पूरा गरेँ ।’